माइकल आँधीको भयमा अमेरिकी : फ्लोरिडा वरपर सतर्कता अपनाउन निर्देशन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माइकल आँधीको भयमा अमेरिकी : फ्लोरिडा वरपर सतर्कता अपनाउन निर्देशन
बीबीसी । फ्लोरिडा र आसपासका क्षेत्रमा बुधवार माइकल आँधी आउने भयबीच दशौँ हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्न आदेश दिइएको छ।
बुधवार अमेरिकी भूभाग पुग्ने तेस्रो वर्गको त्यो आँधीले झन्डै दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हुरी ल्याइरहेको बताइएको छ।
उनीहरूले आँधी बुधवार अमेरिकी भूभाग आइपुग्दा त्यसले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
माइकल आँधीले साढे तीन मिटरसम्म अग्लो छालका साथै ठूलो वर्षा र मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने बाढी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।